Hlola Umm Al Quwain, United Arab Emirates - World Tourism Portal
Hlola Umm Al Quwain, United Arab Emirates
Yini ukubona. Izindawo zokudlela ezihamba phambili ezihamba phambili e-Umm Al Quwain, United Arab Emirates
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha ye-Umm Al Quwain
Bukela ividiyo ekhuluma nge-Umm Al Quwain
Hlola Umm Al Quwain elinye lamalungu e-7 I-United Arab Emirates, ehlanganisa indawo engamakhilomitha-skwele angama-800 futhi isuka endaweni enhle, eluhlaza okotshani yemisundu eluhlaza osogwini lwePersian Gulf, phakathi nezwekazi lokugobhoza kwesihlabathi kuya endaweni evundile yeFalaj Al Moalla.
Idolobha elingaphakathi kwe-oasis ne-hinterland yedolobha laseFalaj Al Moalla likhona endaweni eyi-50km ukusuka edolobheni lase-Umm Al Quwain.
Ukusuka ngoNovemba kuya ku-Mashi amazinga okushisa yi-dyllic futhi i-26C esezingeni lesikhathi sasemini ne-15C ebusuku (79F to 59F). Izinga lokushisa lingakhuphuka ngaphezulu kwe-40C (104F) ephakeme ehlobo futhi amazinga omswakama aphezulu. Imvula incane. Ugu lolwandle luhlangabezana nomoya opholisa olwandle phakathi nosuku.
Igama elithi Umm Al Quwain lisuselwa ku-Umm Al Quwatain, okusho ukuthi "Umama wamandla amabili", kubhekiswa kusiko elinamandla lokuhambisa olwandle kwalolu hlangothi. Umlando wanamuhla we-Umm Al Quwain uqala iminyaka ethile ye-200 lapho isizwe sakwa-Al Ali sisusa inhlokodolobha yaso sisuka e-Al Sinniyah Island siyisa endaweni yaso maphakathi nekhulu le-18th, lapho ukugcwaliswa kwamanzi okumnandi komile.
I-Dreamland, iRas Al Khaimah Highway; iyipaki elikhulu kakhulu emhlabeni
Imisebenzi yesintu yokudoba, i-falconry, ukwakhiwa kwamakamela racingand dhow isabonakala e-Umm Al Quwain emirate. I-Shahin (noma i-peregrine) i-falcon ingabonakala lapha kanye nophisi oludumile oluhlafunwe isikhumba sokuzingela, i-AI-Hur.
Indawo yokwakha i-dhow lapho izingcweti ezinamakhono ziqhubeka nokubuthana khona lezi zikejana zendabuko zisatholakala kakhulu. Edolobhaneni elidala, elizungeze i-fort, izindlu ezindala zamatshe zamakhorali ezindala zisabonisa izici zobuciko bokwakha bokuqala nomsebenzi owenziwe ngobuciko obunjiwe.
I-Aquariumis enkulukazi eceleni kwetheku elisha. Ingxenye yeSikhungo Sokucwaninga Kwasolwandle futhi esivulekele izivakashi ngokulungiselela kwangaphambili, sibonisa izinhlobonhlobo ezinkulu zezinhlanzi nokuphila kwasolwandle okutholakala esifundeni kubandakanya imisebe, izinyoka namakhorali. IBarracuda Beach Resort ingahlelela ukuvakasha kweqembu.
I-Happylandis izulu lezingane ngemidlalo yevidiyo ekhangayo, izinqaba ezigxumayo nokunye okuningi okufunwa ingane
Iziqhingi zase-Umm Al Quwainlie empumalanga yenhlonhlo enkulu yezwekazi endaweni engafani nogu lolwandle ehlanganisa iziqhingi ezinesihlabathi esizungezwe amahlathi aminyene aminyene, ahlukaniswe uchungechunge lwamawa. Isiqhingi esikhulu kunazo zonke kweziyi-7 yi-Al Sinniyah, silandelwa uJazirat Al Ghallah no-Al Keabe, bonke ababonakala edolobheni elidala. Kuhlangene phakathi kwalawa namathafa asogwini iziqhingi ezincane ze-Al Sow, Al Qaram, Al Humaidi, Al Chewria ne-Al Harmala. Umfula iMadaar ogeleza phakathi kweziqhingi unikeza umgwaqo amanzi angabanjwa ngawo kumdobi ngisho nasendaweni ephansi lapho ukujula okuphakathi kungaphansi kwamamitha ambalwa. IBarracuda Beach Resort ingahlelela ukuvakasha kwamaqembu kulezi ziqhingi.
Umjaho weKhamela- ungene ezweni, umgwaqo oya kumjaho we-Camel at Al Labsa ifaka idrayivu enhle kakhulu. Le ithrekhi yomjaho ethandekayo isethwe engxenyeni yezindunduma ezinkulu kuya kwesobunxele komgwaqo oqonde eFalaj Al Moalla. Ezinyangeni zobusika, amakamela agijimela ekuseni ngoLwesine nangoLwesihlanu futhi izibukeli zamukelekile. Ohambweni lwamakamela ayindawo ejwayelekile ewela ugwadule ukusuka kwelinye ithrekhi yomjaho uya kwelinye. Izindunduma kule ndawo, ezigxile ezinhlathini ezinamahlathi, zinikeza indawo enzima kubashayeli bemigwaqo abangenacala noma njengoba zivame ukubizwa ngokuthi “ama-dune bashers”. Ziphinde zinikeze ezinye izindawo ezinhle kakhulu zokukhempa ezinkangala e-emirates zithembisa ubusuku obungenakulibaleka ngaphansi kwezinkanyezi zase-Arabia. Uhambo lwamaqembu okumisa amatende ungahlelelwa.
Umm Al Quwain Museumis ukulungiswa kabusha kwenqaba yase-Umm Al Quwain eyayikade ivikela ukungena kwedolobha elidala, ibheka ulwandle ngakolunye uhlangothi kanye nomfudlana kwelinye. Izakhiwo zemnyuziyamu ezitholakala ezindaweni ezibalulekile eziseduze kufaka i-Al Dour futhi zinikeza ukuqonda okuthakazelisa ngezikhathi ezedlule. Umsebenzi wokubuyiselwa komhlaba uhlelelwe ukuphinda udonga oludala olwaluhaqe indawo yokuhlala lwangempela
I-Al-Durwas idolobha elisogwini lisuka ku-200 BC liye ekhulwini lesithathu AD. Indawo, kanye ngakwesokudla kwe Sharjah/ Umgwaqo omkhulu weRas-al-Khaimah, usubunjiwe kanti izinto eziningi zobuciko ezihehayo zifakwa emnyuziyamu we-UAQ.
I-Palma Bowling Clubis ingaphezulu kokujikijela njengoba kune-echibini (i-snooker), imidlalo yamavidiyo, ibha ye-Shisha, indawo yokudlela eseduze nolwandle nokuningi. Indawo inikeza umuzwa we Egypt (Amaphiramidi neMummies). Ingafinyeleleka kalula ngeTekisi.
Umm al Quwain's Cornicheis indawo enhle kunazo zonke emhlabeni kulabo abajabulela imisindo yamagagasi nokuthula. Ukubhema u- "Shisha" kungaba ngumzuzu omuhle kakhulu e-UAQ's Corniche ebusuku kulabo abathanda uShisha ngokuthula; ikakhulukazi ebusuku ebusika be-chilly.
Ukuhamba ngomkhumbi emanzini ezolile echibhozi kunikeza ukuhamba ngomkhumbi okuhle nokuthakazelisa kakhulu eNyakatho Emirates.
Izimo zilungele ukushushuluza amanzi, ukusebenzisa i-wind surfing, kayakingand jet-skiing. Ukuhamba ngomkhumbi nokuhamba ngesikebhe emanzini acwebile, athule aya eziqhingini ezilahliwe futhi ebuka amachibi emihlume akhiwa yizinhlobonhlobo zasolwandle, izinhlanzi nezinambuzane kunikeza i-adventure eyingqayizivele kunoma yisiphi isivakashi. Ama-flamesos apinki, izinhlanzi ezigxumagxuma, izimfudu, umfantu eziningi nemisebe konke kungabonakala endaweni yazo yemvelo.
I-Umm Al Quwain Marine Club kanye ne-Riding Centeris engekude nenhlanzi, eyindawo enkulu yolwandle olunombala obheke ngasolwandle. Iklabhu yokugibela, eyasungulwa e-1979, ngasikhathi sinamabhiza angaphezu kwe-40 nethimba labafundisi bokugibela abaqeqeshiwe.
I-Umm Al Quwain Aeroclub, engekude ne-Dreamland, ingeyokuqala UAE iklabhu yezindiza futhi yasungulwa ngaphansi kokuphathwa kukaSheikh Mohammed Bin Rashid Al Mualla. Iqashelwa kalula yi-vintage Antonow-2 Bi-Plane kanye ne-Iljuschin-76 Cargoplane enkulu ebonisiwe, I-Airport ine-6 spider hanger, i-1.800m Runway, ngokukhanyiswa kwe-N-VFR, isitolo sekhofi esikhulu. aziwa umhlaba wonke ngomncintiswano wayo we-skydiving neparachute futhi usingethe umqhudelwano we-Asiana Championship 2005, Boogie 2005, 2006. Ngaphezu kwalokho, ihlinzeka kuphela ithuba lokuhamba ezindizayo, ukushisa umoya ngamabhaluni, ukuhamba ngezinyawo (single & tandem!), Parachutingand Para motoring e-UAE. Ukuqeqeshwa nezifundo kunikezwa unyaka wonke futhi kunikezwa izeluleko ezinobungane ezivela kubafundisi nabaqeqeshi bezindiza abanesipiliyoni abanolwazi. Izindiza ezitholakalayo zifaka izibani zama-micro, glitter, Cessnas kanye nendiza ye-aerobatics. Isigaba se-Skydiver kamuva nje sithole i- “AIRVAN” entsha njenge-platform yesikhulumi. Le yindawo enhle yokundiza (futhi ufunde ukundiza!), Kude nezindiza ezinkulu ze-UAE nangaphezu kweminye yemabhishi ase-Arabian Gulf ashiywe emabhishi kanye namachibi okugcoba i-Enchanting. Abathandi bezindiza ezindizayo bahlangana lapha ngoLwesine nangoLwesihlanu futhi wonke umuntu wamukelekile ukungena.
I-Umm Al Quwain Motor racing Clubis esendaweni eseDorlandland futhi inikeza ababambiqhaza ithuba lokubona ijubane, ukuthokozisa kanye nokugibela komjaho wokugibela umgwaqo nokugibela izithuthuthu ezindaweni ezintathu ezenzelwe izinhloso.
IFalaj Al Mualla Ingadi Yepaki. Ambalwa Amamitha kude nebhuloho le-UAQ ku-Emirates Road noma ku-Outer Bypass Road. Indawo esekwe ngumndeni enikeza indawo engakaze ibekhona e-Emirates - Swimming Pool (yezingane nabadala - enamathoyilethi namakamelo okushintsha). Vulekela bonke abahlali ngemali encane kakhulu ye-Dhs. I-2 umuntu ngamunye (ngokusetshenziswa kwamahhala echibini). Isikhathi: I-8am -11pm (ngeSonto-uLwesithathu) Pool kuphela yabesifazane nezingane / 10am - 12mn (ngoLwesine - NgoMgqibelo) ichibi elivulekele imindeni. Ngaphandle kwendawo yokudlala yezingane, izindawo ze-bbq kukhona nokudla okuncane, ukuqashwa kwamabhayisekili, ukugibela ibhayisekili
ILulu Hypermarketis indawo enhle yokuthenga nokuthenga izingubo, iresiphi, izitolo zokudla, amakha kanye nogesi.
ISalma Marketa emakethe encane eyaziwayo edume ngezingubo zayo ezishibhile.
I-Al manamah Hypermarketis indawo enhle yokuthenga nokuthenga izingubo, zokudla, izitolo zokudla, amakha kanye nezinto zobuchwepheshe.
Carrefour Express, eKing Faisal Road. Imishini ebumbene futhi elula yokuthenga izimpahla ezisezingeni eliphakeme.
Amahhotela amaningi ane-bar kanye / noma i-nightclub; ezinye zinokuningi.